Thola Ithonya Lakho: Dala Izingxoxo Zomhlaba Wonke Eziholwa Okuqukethwe Okuphefumulelwe | Martech Zone
NgeSonto, ngoMashi 22, 2020 NgoMsombuluko, Januwari 18, 2021 Douglas Karr
Ukumaketha kwe-Influencer kuxhumanisa imikhiqizo namazwi anamandla wabadali bokuqukethwe kwedijithali. Lokhu kuxhumana kuvusa izingxoxo eziyiqiniso ezungeze umlayezo womkhiqizo, okusebenzisa ukuthembeka nokubandakanyeka komdali kuzo zonke iziteshi zezokuxhumana, ngenkathi ushayela ukuqwashisa nokuzibandakanya.
Lokhu kudala ukuqwashisa ngomlomo kubantu obabhekise ngqo, ngqo ngeziteshi zokuxhumana lapho bachitha khona sonke isikhathi sabo. Ku-Thola Ithonya Lakho, sikusiza ukuthi uthole amazwi afanele omkhiqizo wakho futhi ubavumele basebenze ekusakazeni umlayezo wakho.
Thola Ithonya Lakho
The Thola Ithonya Lakho Ipulatifomu yokuthengisa ethonya (i-FYI) ivumela ama-brand ukuthi akhombe abanamandla, aqalise imikhankaso, ahlole ukusebenza kwawo bese abike imiphumela. Yisixazululo sokumaketha esisebenza ngabo bonke esingasiza izinzuzo ze-PR nezokumaketha zenze amaklayenti abo axhumane nabathonya abaphambili bohlobo lwabo oluthile.
Ipulatifomu yakamuva ye-FYI ifaka amandla okusesha aqinile, kufaka phakathi iminyaka, indawo, ukuzibandakanya, ukufinyelela kwezenhlalo, imikhakha yezimboni, ubulili nobuhlanga. Ngokwengeziwe, izithuthukisi zepulatifomu ze-FYI zivumela imikhiqizo ukuthi iseshe abanamandla ngamagama asemqoka kokuqukethwe kwabo. Lokhu kusho ukuthi ama-brand angacinga igama elingukhiye elingacaciswa ngohlobo lwabo kanye nabathonya ngaphakathi kwenethiwekhi ye-FYI abasebenzise lawo magama angukhiye, noma amagama ahlobene, enkundleni yezokuxhumana, noma ngaphakathi kwebhulogi yabo.
Izithuthukisi ezethulwe kule nguqulo zaziswe ngeminyaka eyisithupha yedatha, kuhlanganiswe nempendulo yomsebenzisi, futhi kwasheshisa impela inqubo yokusesha yabathonya. AbakwaBrands bayazazi izinhlobo zabathonya nababukeli bezithameli abafuna ukubhekisa kubo futhi sithuthukise inqubo yokususa zonke izinto eziyinkimbinkimbi futhi sizisebenzise ngokushesha okukhulu.
UCristine Vieira, uMongameli kanye nomsunguli we-Find Your Influence
Futhi uma iqembu lakho lokumaketha limatasa kakhulu noma lingenalo ulwazi lokusebenza nabathonya, i-FYI inesevisi yokuzikhethela yokufaka iqembu labo labathengisi abangomakadebona ukuze bakwenzele yona. Futhi, imiphumela yabo iqinisekisiwe.
Hlela i-Demo Yethonya Lakho
Mayelana Nokuthola Ithonya Lakho (FYI)
Isungulwe ku-2013, Thola Ithonya Lakho yisixazululo sokukhangisa esinamandla esisezingeni se-SaaS esakhiwe ngabakhangisi babakhangisi. Ithembele kuningi lemikhiqizo ephezulu kulo lonke elase-United States, i-FYI isebenzisa ubuchwepheshe obunikazi bokuthola abathonya, ukuphatha imikhankaso kanye namamethrikhi wokulandela umkhondo. Emakethe yedijithali eqhubeka njalo, i-FYI ilawula ubudlelwano nemikhiqizo futhi ibahlanganise nabathonya abafanele ukuletha imiphumela eqinisekisiwe. I-FYI izinze eScottsdale, e-Arizona kanti iholwa ngababambisene nabo uJamie Reardon noCristine Vieira.
Tags: Cristine vieirathola abathonyathola ithonya lakhofyiUngabathola kanjani abathonyaukuthonya iminyakaukuthonya izibalo zababukeliukumaketha kwamathonyau-jamie qhubeka
ICeltra: Shintsha i-Ad Creative Design Process